Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW Matte Black Bathroom Faucet 4 Inch Centerset
ikaliwe 4.93 Kwi-5 esekelwe kuyo 28 amanqaku umthengi
(28 ncomo ngumthengi)
I-wowowfaucet izimisele ukubonelela ngeemveliso ezixabiso eliphezulu kunye nezisebenzayo. Indawo yokuhlambela yanamhlanje ifunxa yemiyalelo yokufaka. Ukufakwa kulula kwaye kulula ukuyifaka.
2321200B imiyalelo yokufaka
I-2 HANDLES FAUCET BATHROOM: Amanzi ashushu kunye abandayo: I-Drip-Free Ceramic Cartridge, eyakhelwe-kwindawo ephezulu yokutywina yeceramic, ijikeleza kakuhle ukuze kuqinisekiswe ukusetyenziswa kwexesha elide ngaphandle kokudonsa amanzi kunye nokuvuza, kwaye nokulawula ngokuchanekileyo ubushushu bamanzi.
Umgangatho kunye nezixhobo: ukutywinwa okuphezulu kwe-NSF ikhatyriyari ayifakwanga kwaye ayikhokelwa, umgangatho wamanzi uqinisekisiwe; Isixhobo: I-zinc alloy / intsimbi engenasici / isinyithi
IBASIN FAUCET UMGANGATHO OBALULEKILEYO: i-aerator ye-ABS isindisa ama-50% amanzi kunye ne-anti-splatter. I-cartridge ye-ceramic-free yekeyiki. Isuphu esemgangathweni ophezulu kunye nomlenze wobhedu, igobolondo yangaphandle yensimbi, ukuqina.
UMVUZO WOKUGQIBELA NGENDAWO YEMIHLA YESI-3: Nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ukuba ikhona imibuzo. Siza kusombulula ingxaki yakho ngokukhawuleza.
I-SKU: 2321200B iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: 2 Bamba, I-3 Holes, Mnyama
Ibrashi eBrashi / Mnyama
Zinc ingxubevange / Stainless intsimbi
Ndiyazithanda ezi mpompo! Bezitshiphu kuneLowe kunye neDepho yasekhaya kwaye zibukeka zintle kakhulu. Uxinzelelo lwamanzi lulungile ngenene.
ziimpompo ezomeleleyo kakhulu. Sinayo enye malunga nonyaka. Ngoku siyakha saze sathenga ezinye ezimbini zendlu yethu.
Sisasebenza kakuhle unyaka emva kofakelo. Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla, kungekho zimpawu zokuvuza.
Eyona nto intle kwaye esemgangathweni. I-E ibukeka intle kwigumbi lam lokuhlambela ezivenkileni imali engakumbi endinokuyithenga kwakhona enye indlu yam iza nayo yonke into Push iqhosha lokumisa amanzi kwisinki endala yayinayo loo nto
Yithande le faucet kwaye elona candelo lilungileyo kukuphuma komsele, kulula kakhulu kule faucet ikhangeleka intle kwigumbi lam lokuhlambela kwaye isebenza kakuhle.
Izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni kunye nexabiso elifanelekileyo, ndiza kuyincoma le mveliso yombhobho wokuhlambela
Ngaba ugqibelele. Ixabiso elikhulu, akukho sidingo sokuchitha imali ephambeneyo kwiDepho yasekhaya. Oku kuhle kakhulu, okwangoku kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ndiyayithanda, yenza igumbi lam lokuhlambela libukeke lihle.
Ndiyathanda ukuba liphezulu kangakanani kwaye liziko lesinki lihleli. Ukugqitywa / umbala kulungile. Ukusetyenziswa ngokulula kwezibambo kulungile kwaye kulula kwakhona. Ndiza kuthengela enye indlu yangasese.
Ndonelisekile yile mveliso. Kulula ukuyifaka, inembonakalo entle yanamhlanje kwaye isebenza ngokugqibeleleyo ubuncinci okwangoku. Imveliso entle ngeli xabiso.
Ukumangaliswa okumnandi ngomgangatho wompompo kunye nokulula kokufakwa. Yonke into ilunge ngokugqibeleleyo endaweni yento endala, ngakumbi xa imibhobho yamanzi ingangomsebenzi wethu siwuthandayo. Ngokwesiqhelo kufuneka sithathe uhambo olongezelelekileyo ukufumana indawo. Oku kuhambe kakuhle.
Ngoyena mntu weyona mpompo intle inokuthengwa yimali. Ndiyifumene le kwisiqingatha sento yesebe efunekayo kwaye yaziva kwaye ikhangeleka ingcono kunale yabo. Ngaba uya kuthenga kwakhona
Imveliso entle kakhulu kwaye yomelele. Iplagi inkulu kwaye igubungela wonke umngxunya wokuhambisa amanzi (awuhambi nje ngaphakathi).
Sithanda kakhulu ukuba kwenzeka njani emva kokuba oku kufakiwe. Imveliso esemgangathweni kwaye ihlanganiswe kakuhle. Kuza neziqwenga ezi-2 ezahlukileyo: itepu ephethe izibambo, kunye nencindi yenxalenye. Kulula ukuqonda ukuba yintoni eya apho ukufaka ngaphandle kwemiyalelo.
Yakhiwe ngesinyithi kuneplastikhi, kwaye yomelele kakhulu, inesitayile kwaye iyasebenza. NDIYAYICOMBISA KAKHULU le mveliso ukuba ufuna enye into oza kuyitshintsha xa usebenzisa i-RV faucet. Ndiza kuyikhetha le brand kwakhona xa ilixesha lokutshintsha itephu yesinki yekhitshi ngaphandle kokubuza.
Kulula ukuyifaka kwilize elitsha. Ukuhamba kwamanzi kuhle! Kuthathe malunga nemizuzu eyi-10 ukuyifaka! Oku kusebenza kakuhle kwigumbi lokuhlambela labandwendweli. Siyawuthanda umsebenzi osivumela ukuba silawule okushushu nokubanda ngaxeshanye. Iza nazo zonke iinxalenye kunye nemiyalelo yayilula
Le yeyam yokuhlambela inkosi yam, eyam yoqobo ivuza kakhulu, ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndifumane entsha enenkangeleko entle. Ke ndiza kufumana isitayile esitsha sokuhlambela. Kulula kakhulu ukuyifaka, esemgangathweni olungileyo, kwaye ndiyakholelwa ukuba ingcono kuneemveliso zexabiso elifanayo eLowe okanye eDepho yasekhaya. Ndizijongile ezi venkile zimbini, kwaye iipompo zibiza kakhulu apho, uninzi lwazo lumalunga ne- $ 70. I-WOWOW inomgangatho ofanayo kuluhlu lwamaxabiso kwezi venkile zimbini.
Ndiyayithanda le faucet. Kwakulula ukuyifaka. Ihambelana nekhabhathi kwigumbi lokuhlambela lam kakuhle. Ndonwabile kakhulu ukuba ndiyithengile. Ifikeleleka kakhulu. Andiqinisekanga ncam ukuba izakuhlala ixesha elingakanani kodwa kubonakala ngathi inakho ukuhlala ixesha elide kuyo yonke le minyaka.
Kulula kakhulu ukufaka. Umgangatho olungileyo, ndithathe kuphela i-10min ukuyitshintsha. Amanzi aphuma ngokukhawuleza kwaye omelele. Kufanelekile
Ukupakisha kobuchwephesha Ndonwabile kakhulu, macala onke, ngale mveliso kuthengwa ukuyifaka. Ndiyabulela ngeli xabiso liphezulu kwaye kulula kakhulu ukuyifaka. Yonke into iqinile kwaye iqinile.
Ndisebenzela ukutshintshwa kwezinto ezingenaxabiso lokuhlambela ngokukhawuleza ukuba zithumele ziya kuthenga kwakhona
Into enkulu. Kulula kakhulu ukufaka. Yithande ukutyhala ezantsi kwentwasahlobo. Mhle kakhulu.
Le tephu ilungile kwigumbi lam lokuhlambela. Ineziphatho kwaye kulula ukubona ukuba kuyabanda okanye kushushu. Kulula ukuyisebenzisa kwaye usapho lwam lonke luyayithanda.